सरल कर्जामा युवाको आकर्षण | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी सरल कर्जामा युवाको आकर्षण
on: December 13, 2018 रोजगारी
काठमाडौं । विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सरल कर्जा कार्यक्रमप्रति युवाको आकर्षण बढेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विशेष ज्ञान, शीप र दक्षता आर्जन गरेर नेपालमा पेशा, व्यवसाय तथा उद्यम गर्न इच्छुक युवालाई आव २०७५/७६ मा रू. १० लाखसम्म सरल कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम शुरू गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालयले स्वदेशमै स्वरोजगार हुन इच्छुक युवालाई सूचीकरणका लागि आह्वानसमेत गरिसकेको छ । बोर्डले यही मङ्सिर १३ गतेदेखि आवेदन सङ्कलनको काम शुरू गरेको हो । सरल कर्जा कार्यक्रमप्रति युवाको आकर्षण देखिएको छ ।
मंगलवारसम्म १ हजार २ सय २३ युवाले सरल कर्जाका लागि निवेदन दिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । अहिले बोर्डको सचिवालयमा सरल कर्जाका लागि निवेदन दिन आउने युवाको बिहानैदेखि भीड लाग्न थालेको छ । दैनिक करीब ७०/७५ युवा सरल कर्जाको निवेदन दिन बोर्डमा पुग्ने गरेका छन् ।
विदेशमा सिकेको शीप नेपालको विकासमा लगाई समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास लिएको छ । सरल कर्जा प्राप्त गर्न श्रम स्वीकृति लिई वा नलिई कुनै पनि देशमा कम्तीमा ६ महीनासम्म सम्बन्धित तालीम÷पेशा÷व्यवसायको क्षेत्रमा काम गरी नेपाल फर्किएको ३ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले सरल कर्जा कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने बोर्डले बताएको छ । उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव आवेदन फारम भर्दा बुझाउनुपर्नेछ । कर्जा भुक्तानी अवधि ५ वर्षको छ ।
सरल कर्जा आवेदन गर्दा नागरिकताको प्रतिलिपि, राहदानी÷प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि, श्रम स्वीकृति लिई काम गर्न गएको देशबाट फर्केको हकमा श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि, अध्यागमन कार्यालयबाट प्राप्त हुने आगमन स्टिकरको प्रतिलिपि र विदेशमा कम्तीमा ६ महीना सम्बन्धित तालीम/पेशा/व्यवसाय वा क्षेत्रमा काम गरेको खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने कोषले बताएको छ ।
तोकिएका शर्त पूरा भएका निवेदन संकलन गरी बोर्डले स्वरोजगार हुन चाहनेका लगत विवरण तयार पार्ने र सहुलियत कर्जाका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने बोर्डका उपसचिव सुवेदीले बताए ।
सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा विदेशबाट फर्केका युवाको शीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रू. १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । रासस